Rashi Pande – Nikah | Nepali Stories
राशि पाण्डे – निकाह
अब्व्दुल अस्पताल भर्ना भएको थियो । रजिया दुई महिनादेखि दिनरात उसको सेवामा खटिरहेकी थिई । आफ्नो जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि ऊ राजधानीको यस सुविधासम्पत्र अस्पतालमा थप उपचारका लागि आएको थियो ।
बिरामीको हेरबिचार गर्न उसकी औरत रजिया पनि सँगै आएकीले केही महगो भए तापनि क्याविन मै बस्ने निधो गरेको थियो अब्दुलले । बिरानो ठाउँ, आफ्नो जात, विरादरीको कोही चिनेका मानिसहरू थिएनन् । डाक्टरसँग सल्लाह गर्ने, औषधि किन्ने, एक्स–रे गराउने, रिपोर्ट ल्याउने अनि रातभरि जागेर बिरामी रुँग्ने सबै काम रजिया आफैँ गर्दथी । ऊ दिनरात केही नभनी लोग्नेको स्याहारसुसारमा तल्लिन थिई । राजधानी बसेर पढ्ने, व्यापार गर्ने वा जागिर खाने गाउँतिरका मानिसहरू पनि कहिलेकाहीँ सञ्चोबिसन्चो सोध्न आउँने गर्दथे ।
रजिया लोग्नेको गोडानिर बसेर पैताला सुम्सुमाई रहेकी थिई, कतिबेला आँखा झिमिक्क भएछ होसै पाइन । जब ऊ झल्याँस्स भई । आँखा खुल्दा ओच्छानभरि, कपडामा, अब्दुलको जीउभरि रगतैरगत थियो । ऊ आत्तिएर रुन थाली । नर्सहरू दौडिएर आए, ड््युटिको डाक्टरलाई पनि बोलाइयो ।
बिरामी निदाएको बेला छटपटाएर, सलाइन् दिएको निडल थुतिएर रगत बगेको रहेछ, “आत्तिनु पर्दैन, केही हुत्र” नर्स र डाक्टरले आश्वासन दिँदा पनि रजियाको आँसु थामिएन् । ऊ आफूलाई धिक्कार्न थाली, कोस्न लागी । आफूबाट भएको गल्तीका लागि अल्लाहसँग माफी मागी, घुँडा टेकेर धरतीलाई ढोक्दै आफ्नो गल्तीमा पश्चात्ताप गरी । अनि मक्काको काबातर्फ मुख फर्काएर कलमा पढ्न, प्रार्थना गर्न थाली –ला इलाही इल्लिल्लाहो, मोहम्मदुर रसुलल्लुह७ । उसले अब्दुललाई चाँडै बिसेक गरिदिन अल्लाहसँग दुआ मागी ।
रजियाको आलापविलाप सुनेर अब्दुलका पनि आँखा रसाए । उसले आँखाभरि आँसु गरेर सम्झाउने कोसिस गर्यो – अर्रहमनिर रहिम ! नरोऊ, तिम्रो गल्तीले गर्दा यसो भएको होइन, म आफैले बिराएर हो । सलाइन दिएको ठाउँबाट अलिकति रगत मात्र बगेको छ, यति रगत बगेर केही हुन्न । आफ्नो सानो गल्तीले बिरामीको शरीरबाट त्यति रगत बग्यो, रजियाको रुवाई रोकिदैँ रोकिएको थिएन ।
अब्दुलले रजिया तिर हेर्यो– ऊ धेरै दिनको अनिदोले बिरामीजस्ती देखिई । गाउँमा बूढा आमाबुआ मात्र, जान्नेसुन्ने इष्टमित्रहरू सबै कमाइका लागि विदेश गएकोले आफन्तहरूमध्ये केही पढेलेखेकी उही रजियामात्र थिई । अनि उसैलाई साथीको रूपमा लिएर काठमाडौँ लैजाने घरसल्लाह भएको थियो ।
गोडा मिचिरहेकी रजिया अति माया लाग्दी देखिएकी थिई । ‘यसलाई बिहा गरेर मैले पापै गरेँछु, अल्लाहले मलाई माफ गर्ने छैनन्’, अब्दुल मनमनै सोच्न थाल्यो र आफूले बिहेका लागि स्वीकृति दिएकोमा पश्चात्ताप गर्न लाग्यो ।
उनीहरूको बिहा भएको पनि ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो । रजिया दुलही बनेर आएपछि, गाउँघरमा सबैकी चहेती बनेकी थिई । सबैसँग हाँसेर बोल्दथी, सबैलाई सकेसम्म सहयोग गर्दथी । मदरसा इस्लामियामा पढ्ने केटाकेटीहरूलाई ऊ अरबी भाषामा लिखित पवित्र ग्रन्थ कुरान सिकाउँथी । सरकारी स्कुलमा पढ्नेहरूलाई अङ्ग्रेजी र हिसाब गर्न मद्दत गर्दँथी । आइमाई बूढीहरूलाई इस्लामिक धार्मिक गीत मिलाद सुनाउने गर्थी । के केटाकेटी, के बुढाबुढी सबैले रजियालाई मन पराएका थिए ।
अब्दुलको परिवार गाउँभरिमा सम्पत्र थियो । दसदस विघा जग्गा थियो, गोठभरि गाईभैँसीहरू थिए, किराना पसल थियो । अब्दुल घरको एक्लो छोरो, उसका दुई बहिनीहरू बिहे गरेर छिमेकीे गाउँमा घरजम गरिरहेका थिए । अब्दुलको परिवारले गाउँमा मदरसा, मस्जिद बनाउन पाँचपाँच कट्ठा जग्गा दान दिएका थिए । समाजमा उनीहरूको परिवारलाई मान, सम्मान, इज्जत सबै प्राप्त थियो ।
अब्दुलकी आमालाई अब एउटी बुहारीको मात्र खाँचो थियो । उसले वरपर छरछिमेक वल्लोपल्लो गाउँ सबैतिर बिहेयोग्य केटीहरू हेरिरहेकी थिई, तर अब्दुल बिहा गर्न राजी भएकै थिएन । अम्मा, अर्काकी छोरीको जीवन किन बर्वाद गर्ने ? म बिहा नगरी त्यसै बस्छु । बिहाको कुरा चल्दा ऊ आमालाई सम्झाउँदै भन्ने गर्दथ्यो ।
छोरा ! खुदाले हामीलाई सबै थोक दिएका छन् । तर समाजमा इज्जत राख्नैको लागि पनि तिम्रो बिहे गर्नुपर्दछ । मानिसहरूले दसथरी कुरा काट्न लागिसके । बरु दुःख पाएकी, गरिब केटीसँग बिहा गर, अन्धी, लुलीसँग बिहा गर, जोसँग गरेपनि मलाई एउटी बुहारी ल्याइदेऊ । आमा हरतरहले अब्दुललाई बिहेका लागि राजी गराउने, फकाउने कोसिस गर्थी ।
ऊ आमालाई सम्झाउन खोज्दथ्यो, “अम्मी! तपाइँलाई सबै कुरा थाहा छ र पनि किन मेरो बिहेका लागि यति जिद्दी गर्नुं हुन्छ ? म बिहे गर्नै सक्दिन, म कसैलाई स्वास्नी बनाउन सक्दिन ।”
चुप लाग, यस्तो कुरा गर्ने होइन । आइमाईहरू सहनशील हुन्छन्, बिहे गरेपछि सबै सहन्छन्, आआफ्नो नसिब हो । उसकी आमाको आग्रहअघि अब्दुल लाचार बन्दथ्यो । अनि जब अब्दुलकी बहिनीले रजियासँग बिवाहको प्रस्तावलिएर आई । उसले रजियाको फोटो हेर्ने मौका पायो । अनि अब्दुलले आफ्नो बिगत, वर्तमान सबै बिर्सेर बिहा गर्ने स्वीकृति दियो । ओहो ! यो त इदको चाँदजस्तै मोहक रहिछ – सुन्दर, सुशील ।
बङ्गाली मुसलमान रजिया गरिब परिवारकी थिई । रजियाको सुकुम्वासी परिवार बङ्लादेश पाकिस्तानकै अधिनमा रहेको बेला दङ्गाबाट विस्थापित भएर नेपाल पसेको थियो । जाती, धर्म, रितीरिवाज एउटै भए पनि नेपाली मुसलमानहरू बङ्गाली मुसलमानलाई आफू भन्दा सानो र निम्नस्तरका मान्दथे । आफ्नो चेली उनीहरूलाई दित्रथे तर उनीहरूको छोरी, बहिनीलाई बुहारी बनाउँथे ।
रजियाको जन्म यहीँ नेपालमै भएको थियो । पहाडे हिन्दू केटाकटीेहरूसँग खेल्दै, हुर्केकी, रजिया नेपाली, हिन्दी, उर्दू सबै भाषा राम्रै बोल्दथी । उसले झापाको सरकारी विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म पढेकी थिई । अनि आफ्नो काकासँग घर मै अरबी भाषा पनि सिकेकी थिई । ऊ पाएसम्म धर्मग्रन्थका पुस्तकहरू पढ्ने गर्थी, रोजा राख्दथी, नमाज पढ्थी । प्रत्येक शुक्रबार हुने जुम्माको नमाजका लागि मस्जिदमै जाने गर्थी । दीनदुःखीहरूको सक्दो सेवा र जकात गर्थी ।
सुरुमा भद्रपुरमा बसेको रजियाको परिवार केहि वर्षपछि कोसीछेउको यस बस्तीमा दुई कट्ठा जग्गा किनेर बसाइँ सरेको थियो । यस गाऊँमा तराईबासी छ््यासमिसे हिन्दू परिवारका साथै पुस्तौँदेखि बस्दैआएका नेपाली मुसलमाहरूको बाक्लो बस्ती थियो । रजियाको बुबा किसान मजदुरी गरेर परिवार पाल्थ्यो । ऊसँग पैसा नभएकोले उमेर नाघिसक्दा पनि छोरीको बिहा गर्न सकेको थिएन ।
रजियाजस्ती गरिब, दुःख पाएकी केटीसँग बिहे गरे धर्म हुन्छ, परोपकार हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अब्दुल बिहे गर्न राजी भएको थियो । अनि केही दिनभित्रै रजिया बुहारी बनेर अब्दुलको घर आएकी थिई । रजियाको व्यवहार, आफूभन्दा मान्यजनहरूलार्ई गर्ने आदरसम्मान, सासूससुरा तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूप्रतिको माया र सेवाबाट सबै प्रशत्र थिए । तर अब्दुल एउटा चिन्ताबाट पिल्साइरहेको थियो । ऊ रजियासँग एक्लै भएको बखत बडो दुखी भएर भन्थ्यो, “रजिया ! मलाई माफ गर । मैले तिमीलाई ठूलो धोका दिएँ । अन्धकारमा राखेँ, तिम्री जीवन बर्वाद बनाएँ । मैलै एउटा कुरा तिमीलाई थाहा दिएको छैन । तिमीजस्ती राम्री, ज्ञानी र सुशिल केटीले राम्राराम्रा लोग्ने पाउने थियौ, अझ पनि पाउन सक्छौ ।”
“यो के भत्रुभएको मेरो आका ! मलाई तपाइँले बिहे गरेर कत्रो उपकार गर्नु भएको छ, नत्र हामी जस्तो गरिब केटीसँग कसले बिहा गर्ने थियो ? अल्लाह दयालु छन् । तपाईले यस्तो कुरा गर्नु हुत्र । लाइलहा इल्लालाहुल अलियुल अजिम, अल्लाहको नाम लिनोस् । यस्तो पाप नबोल्नुहोस् । तपाइँ किन यस्तो सोच्नु हुन्छ ?” ऊ अब्दुलको गोडा समाएर रुने गर्दथी ।
रजिया, अब्दुलको गोडा मिचेर बिगतका कुराहरू मनमा खेलाइरहेकी थिर्ईं । नर्सहरू आफ्नो नियमित ड््युटिका लागि आएको बेला अब्दुललाई अझै जागै र चिन्तित देखेर निद्रा लगाउने इन्जेक्सन दिएर गएका थिए । अब्दुल आँखाभरि आँसु लिदै लट्ठ भएर निदाएको थियो ।
रजियाको मन फेरि विरक्त भयो । मनमा विभित्र शङ्काउपशङ्का जाग्न लागे । ऊ बिगतमा हराई । बिहा गरेर ऊ अब्दुलको घर भित्रिएपछि, उसले घरव्यवहार समालेको देखेर अब्दुल झन्झन् उदास देखिन्थ्यो । ऊदेखि टाढाटाढा जाने, केही पश्चात्ताप, केही गल्ती गरेजस्तो उसको व्यवहार बुझीनसक्नुको थियो । ससुरा प्रायः दिनभरि पसलमै बस्थे । सामान बिक्री गर्नु, फुर्सत भएको बेला हुक्का तात्रु, नियमित रूपले नमाज पढ्नु, मस्जिद जानु रोजा, बकरिद पर्वहरू धूमधामसँग मनाउनु, उनी एक आदर्श मुसलमान थिए । सासूससुरा दुवैले रजियालाई आफ्नी छोरी जस्तै माया गर्दथे । रजियालाई कुनै चिजको कमी थिएन । उसलाई एउटै कुरामा आश्चर्य लाग्दथ्यो बिहा भएको ६–६ महिना बितिसक्दा पनि अब्दुल एक रात ऊसँगै सुतेको थिएन । धेरैजसो ऊ घरबाहिर बस्ने औसर खोज्दथ्यो र घरमै बसेको रात एउटै कोठाभित्र सुत्दा पनि ऊ सन्चो नभएको, तवियत खराब भएको बहाना बनाउँथ्यो । ऊ अब्दुलको गोडा मिचीदिन्थी, तेल लगाइदिन्थी । भो, भो तिमी थाकेकी छौ भन्दाभन्दै ऊ निदाएर घुर्न लाग्दथ्यो । रजिया उसको बलिष्ट पाखुरा र चौडा छाति हेर्दै छटपट गरेर धेरै रातसम्म अनिँदै रहन्थी ।
पसलका लागि सामान कित्र, घरका लागि केही सामान ल्याउन इनरुवा वा सीमा पारिको शहर विरपुर जानु पर्दा रजियालाई पनि सँगै लिएर जाने आदेश अब्दुलकी आमाले दिन्थी, “बुहारी दिनभरि एक्लै बसिरहन्छे, भटभटियामा पछाडि राखेर दुलहीलाई पनि लिएर जा, उसको मन बहलिन्छ ।”
सामान कित्र धरान वा विराटनगर जाँदा रजिया अन्य स्वास्नीमानिसहरू जस्तै साडी वा सेरवानी मात्र लगाउँथी तर सीमापारि भारतको विरपुर बजारमा सस्तो सामानहरू कित्र जाँदा रजिया बुर्का पनि लगाउँथी । बुर्का लगाएकी महिलालाई मानिसहरू इज्जत दिन्थे, बुर्काले उसलाई लोग्नेमानिसहरूको उत्ताउलो नजरबाट पनि जोगाउँथ्यो, ऊ आफूलाई सुरक्षित ठान्दथी र मनलागेको कुरा निर्धक्कसँग बुर्काभित्रबाट हेर्न पनि सक्थी ।
रमदान पर्व नजिक आइरहेको थियो । घरयसी सामान कित्र उनीहरू मोटरसाइकलमा बसेर वीरपुरतिर जाँदै थिए । डुमराही नजिक एक्कासि एक हूल नापाक जन्तु (सुँगुर) च्वाँच्वा गर्दै बाटो छेक्न अगाडि आइपुगेको थियो । या अल्लाह, त्यहि अपवित्र जन्तुबाट बच्न खोज्दा उनीहरू दुर्घटनामा परे । संयोगले रजिया लडेर एउटा बलौटे खाल्डोमा खसी तर अब्दुल अगाडिको रूखमा ठोक्किन पुगेको थियो । गाउँलेहरूले उनीहरूलाई नजिकैको हेल्थपोष्टसम्म बोकेर पुर्याएका थिए ।
घाउ त्यति गहिरो छैन भनेर उनीहरू स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र मै उपचार गराएका थिए तर घाउ झन्झन् बल्झिएर सेप्टिक भएको थियो । अनि उनीहरू लाचार भएर काठमाडौँ आएका थिए– थप उपचारका लागि ।
रजिया अल्लाहसँग बिलौना गर्दथी, “किन यो घाउ मलाई लगाइदिएनौ, अब्दुललाई किन यति दुःख दिएको ?” ऊ अल्लाहसँग प्रार्थना गर्दथी । ऊ विगतमा हराएर कति बेला निदाइ पत्तो नै भएन ।
“बेगम, बेगम”! अब्दुल उसलाई बोलाइरहेको थियो, उसलाई पिसाब लागेको रहेछ । युरिनलमा पिसाब फेराउन लाग्दा ऊ जहिले पनि रजियालाई अर्कैतिर हेर्न, भित्तातिर फर्कन भन्ने गर्दथ्यो । रजिया अचम्म मान्दथी कस्तो लाज मान्ने लोग्नेमानिस हो, आफ्नी स्वास्नीसँग पनि यति धेरै लाज मान्छन् र ? ऊ छक्क पर्दथी ।
अब्दुललाई हेर्न, उसको सञ्चोबिसन्चो सोध्न उनीहरूकै गाउँको हमिद कहिलेकाहीँ आउने गर्दथ्यो । हमिद, अब्दुल भन्दा करिब तीन, चार वर्ष जेठो थियो । तर एउटै गाउँ, एउटै ठाउँ, सँगै गाईभैँसी चराउँदै, कोसीमा पौडी खेलेर हुर्किएका थिए । अचेल ऊ माझीहरूले मारेको कोसीको माछा काठमाडौँमा ल्याएर बिक्री गर्दछ । राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो । गाउँघरतिरका मानिस काठमाडौं आएको बेला, आवश्यक सहयोग उसैले गर्दथ्यो । अब्दुलको लागि पनि गाउँबाट पैसा ल्याइदिने उनीहरूको हालखबर आमाबुबासम्म पु¥याउने काम उसैले गर्दथ्यो । हमिदकी स्वास्नी केही वर्षअघि कोसीको भङ्गालो तर्न लाग्दा डुबेर मरेकी थिई । त्यसपछि उसले अर्को बिहा गरेको थिएन । हमिद, रजियालाई हेरेर जिस्काउँने गर्दथ्यो, “बेगम साहिवा ! आफ्नी स्वास्नी त अल्लाहकी प्यारी भई, मलाई तिमीजस्तै राम्री एउटी खोजिदेऊ न ।”
हमिद अस्पताल आएको दिन अब्दुल पनि निकै खुसी हुन्थ्यो । उसको अनुहार हँसिलो हुन्थ्यो । उनीहरू धेरैबेरसम्म हाँसीहाँसी बाल्यकालका कुराहरू गर्दथे । बसको पछिपछि झुन्डिएको, कोसीटप्पुमा चराको सिकार खेलेको, कोसीमा माछा मारेको, पौडी खेल्दा डुबेर पानी खाएका कतिकति कुराहरू हुन्थे । अनि अब्दुल, हमिद र रजियालाई सँगसँगै बस्न लगाएर कस्तो सुहाएको जोडी भन्दै जिस्काउँथ्यो । जब हमिद जान्थ्यो, अब्दुल थकान र कमजोरीले लस्त भएर अलसतलस बन्दथ्यो ।
डाक्टरको उपचारले, रजियाको सेवासुसारले अब्दुललाई धेरै बिसेक हुँदै गएको थियो, गोडा काट्नु परेन, उसका घाउ भरिदै आएको थियो । जब अब्दुल आफैँ केही हिँड्डल गर्न सक्ने भएको थियो उसले हमिदसँग अनुनय गरेर रजियालाई काठमाडौँको घन्टाघर स्थित जामेमस्जिद, दरबारमार्ग स्थित पञ्च कस्मिरी, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको स्वयम्भू, हिन्दूहरूको पशुपति आर्यघाट, विदेशी पर्यटकहरूको थलो ठमेल, किनमेलको बजार न्युरोड सबैतिर घुमाउन लगाएको थियो ।
रजिया पराया लोग्नेमानिससँग एक्लै घुम्न जान मान्दिनथी । अब्दुल उसलाई फकाउँदै भनेको थियो, “हमिद त आफ्नै परिवारको सदस्य हो, ऊसँग के लाज मात्रु, फेरि यहाँ परदेशमा ऊ बाहेक हाम्रो को छ र ? तिमी अल्लाहसँग दुआ माग्न मस्जिद जान लागेकी हौ, पाप लाग्दैन, जाऊ, काठमाडौँ आएको बेला, जानुपर्छ । अहिले हामी मक्का जान नसक्नेहरूका लागि यही जामेमस्जिद हाम्रो लागि मक्का हो, मौका गुमाउनु हुन्न ।”
रजिया लोग्नेको लागि दुआ माग्न पनि मस्जिद जान राजी हुन्थी । उनीहरू फर्केर आएपछि अब्दुल, हमिदको खुब तारिफ गर्दथ्यो, “बडो असल मानिस छ । आर्थिक रूपले सम्पत्र छ, आफ्नी स्वास्नीलाई एकदम माया गर्दथ्यो ।” अनि उदास भएर भन्ने गर्दथ्यो, “रजिया म गुनहगार हुँ, मैले नापाक काम गरेकोले अल्लाहले मलाई यो दुघटनाले एउटा सजाय दिएका हुन्, सचेत गराएका हुन् । अखिरत का दिन दोखज जानुपर्नेछ, म नरक जान चाहात्र । अल्लाह मियाँ, मलाई माफ गर ।”
यस्तो कुरा नगर्न रजिया ऊसँग अनुनय, गर्दथी, बिन्ती गर्दथी । तिमीलाई पाएर म एकदम सुखी छुँ, खुसी छुँ भन्थी । तर किन हो किन अब्दुल भित्रभित्रै जलिरहेको हुन्थ्यो ।
अब्दुललाई डिस्चार्ज गर्ने समय आउन लागिसकेको थियो । रजिया पनि अचेल निकै खुसी देखिन्थी अल्लाहले कृपा गरे– रहम गरे भनेर । अल्लाहको लाखलाख शुक्र३७ छ, धन्यवाद । आफ्नो लोग्ने, आफ्नो हरम बिसेक भएकोमा ऊ अल्लाहलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन्थी ।
रमजानको महिना चलिरहेको थियो । मुसलमानहरू रोजामा थिए, दिनभरि निराहार भएर व्रत बस्थे । आज पनि हमिद, अब्दुललाई भेट्न आएको थियो । अब्दुलले रजियालाई सेवई र खजुर किन्न बाहिर पठाएर हमिदसँग कुरा गर्न लाग्यो ।
अब्दुलले हमिदको हात समातेर विनित स्वरमा भन्यो, “हमिद मियाँ मलाई पैगम्बरबाट एउटा इलहाम प्राप्त भएजस्तो लाग्छ । मलाई अल्लाहले हजगर्न जाऊ, मक्का जाऊ भन्ने आदेश दिनु भएको छ । म अब यो साँसारिक मायामोहबाट छुटकारा चाहान्छु । म तिमीलाई एउटा परोपवारको काम सुम्पन चाहान्छु । यो पवित्र महिना हो, तिमीले मलाई सहयोग गर्ने बचन दिनुपर्छ । एक सच्चा मुस्लिमले धर्मको कामबाट नाइँ भत्र मिल्दैन, मलाई बचन देऊ ।”
हमिद बडो दुविधामा पर्यो । ऊ पनि एक सच्चा मुसलमान थियो, फेरि रमदानको महिना । सिकिस्त बिरामी भएर थला परेको बाल्यकालको मित्र, उसले सक्दो सहयोग गर्ने बाचा गर्यो । हमिदबाट आश्वासन पाएपछि अब्दुल भत्र लाग्यो, “हेर ! हाम्री रजिया अहिले पनि उस्तै पवित्र छ, जस्ती बिहा गर्नु अघि थिई । तिमीलाई थाहा नै छ, जब म तीनचार वर्षको थिएँ, मेरो मुसलमानी गर्दा खतना गरेको ठाउँमा बाँसको कर्चिले घोचिँदा संक्रमण भई पाकेको थियो । पछि त्यो घाउ बिसेक त भयो तर जननेन्द्रियका नसाहरू गुँडुलो परेर बडहरको फल जस्तो गुजुल्टो परेको छ । अब त्यो अङ्ग एक पिसाप फेर्ने प्वालको रूपमा मात्र बाँकि छ । तिमी भन यस्तो अवस्थामा मैले रजियासँग बिहा गरेर महापाप गरिन् ? के लाई अल्लाहले माफ गर्छ्न् ? तिमी मलाई यो पापबाट उन्मुक्त्ति देऊ, तिमी रजियासँग बिहा गर ।”
अब्दुलसँग छलफल भएपछि हमिदले रजियालाई आफूले पनि बिहा गर्ने कुरा सुनायो । केटी पनि फेला परिसकेकी छ तर उनको स्वीकृति लिनमात्र बाँकी भएको भन्दै उसले रजियालाई रोजाएर काठमाडौँमा थुप्रै लत्ताकपडा किन्यो, गहनाहरू बनायो ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि अब्दुल, रजिया र हमिद एउटै बसबाट सँगै आफ्नो गाउँ रहिमपुर आए । घर पुगेको केही दिनपछि अब्दुलले गाउँमा एक भोजको आयोजना गर्यो, इफ्तारीको आयोजना गर्यो । इष्टमित्र, मौलवी, हाजी सबै निमत्याइए । भोजको कार्यक्रममा रजिया सहित अन्य महिलाहरू पर्दा पछाडि बसेर सहभागिता जनाइरहेका थिए । उपस्थित भद्र भलादमीहरूको बैठकमा अब्दुलले रजियालाई पनि निम्त्यायो । ऊ लजाउँदै, डराउँदै पर्दा पछाडि आएर बसी ।
अनि केही गम्भीर भएर उपस्थित भलादमीहरूको ध्यान आफूतिर आकृष्ट गर्दै अब्दुलले रजियातिर हेरेर भत्र सुरु गर्यो, “रजिया एकदम नेक कन्या हुन् । उनले मलाई, मेरो परिवारलाई र मेरो सेवा स्याहारमा कुनै कमी राखेकी छैनन् । उनमा कुनै खोट छैन, तर म एक योग्य पति हुने क्षमता राख्दिन, म उनको योग्य छैन । म रजियालाई स्वतन्त्रता दिन्छु, उसलाई आफ्नो बन्धनमा बाँधी राख्न चाहन्न । उसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहान्छु । हाम्रो सम्बन्ध लोग्नस्वास्नीको रूपमा नरहेतापनि हामी सधैँ एक असल मित्र रहने छौँ ।” अनि उसले इस्लामी सरिअन अनुसार तीन पटक भन्यो –
“तलाक ! !”
“तलाक ! ! !”
“रजिया अवाक् भई, ऊ रुन लागी । यो के भयो, उसले के र कहाँ के गल्ती गरी, किन अब्दुलले यसरी तलाक दियो ? उसले केही थाहा पाइन ।
मानिसहरू खासखुस गर्न लागे । केही युवाहरूले विरोधको स्वर उठाउन चाहे । अनि मानिसहरूलाई शान्त पार्दैं भीडबाट उठेर हमिदले भन्यो, “इहदिनास सिरातल मुस्तकिम, अब्दुल एकदम नेक मानिस हुन् । उनी अल्लाह र उसका रसुलमा विश्वास राख्छन् । रजियासँगको तलाक पनि अल्लाहको रसुल हो । तपाइँहरूलाई थाहै छ, मेरी बेगम मरेकी पनि आज तीन वर्ष भयो । म एक्लो छुँ– म पनि परिवार बसाउन चाहान्छु । घरजम गर्न चाहान्छु । रजियाको स्वीकृति पाए म ऊसँग निकाह गर्छु । म उनलाई जीवन साथी बनाउन चाहान्छु ।”
उसले मौलाना तिर हेरेर हात जोड्दै निकाहका लागि स्वीकृति माग्यो । उपस्थित जनसमुदाय तर्फ हात जोड्दै समर्थन चाह्यो, अनि पर्दा पछाडिकी रजिया तिर हेर्दै सहयात्राका लागि याचना गर्न लाग्यो ।
गाउँका पाका मानिसहरू अब्दुलको प्रशंसा गर्न लागे, “क्यावात, क्यावात अब्दुल ! तिमीलाई हाम्रो शुभकामना छ ।” ंअब्दुल र हमिद आपसमा अङ्कमाल गर्दै एकअर्र्कालाईं बधाई दिए । पर, पर्दा पछाडि बसेकी रजिया एकै पटक मिलन र बिछोडको भुमरीमा परी । हर्ष र बिस्मातको भँगालोमा भासिई । उसको अनुहार भूपिको ‘मैनबत्तीको शिखा’ झैँ भयो–
एकातिर धप्पधप्प बलिरहेछ अनुहार !
अर्कातिर तप्प तप्प ढलिरहेछ अश्रुधार !!
Tags : Muslim Wedding Nepali Katha Nepali Muslim Story Nepali Stories Nikah Rashi Pande
Previous PostRaju Sharma – Television
Next PostPurna Munankarmi – Sarpa Udhhyog